Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - SS 2T 2016
APRILY - MAY - JONA
Lesona 1 Zanak'i Davida 26/03 - 01/04
Lesona 2 Niantomboka ny asan'i Jesosy teto an-tany 02/04 - 08/04
Lesona 3 Ny toriteny teo an-tendrombohitra 09/04 - 15/04
Lesona 4 "Mitsangana ka Mandehana" Finoana sy fanasitranana 16/04 - 22/04
Lesona 5 ilay ady hita maso sy tsy hita maso 23/04 - 29/04
Lesona 6 Mitsahatra ao amin'i Kristy 30/04 - 06/05
Lesona 7 Andriamanitry ny Jiosy sy ny Jentilisa 07/05 - 13/05
Lesona 8 I Petera sy ilay vato 14/05 - 20/05
Lesona 9 Ny sampin'ny fanahy 21/05 - 27/05
Lesona 10 Jesosy tany Jerosalema 28/05 - 03/06
Lesona 11 Ireo zavatra hiseho amin'ny andro farany 04/06 - 10/06
Lesona 12 Ireo andro farany niainan'i Jesosy 11/06 - 17/06
Lesona 13 Nohomboana ary nitsangana tamin'ny maty 18/06 - 24/06
Rehefa teraka i Rick Hoyt, tany Winchester Massachusetts, dia nanodidina ny tendany ny tadim-poitrany ka nanakenda ary saika nahafaty azy mihitsy. Nisy fiantraikany tany amin’ny atidohany izany, ka nahatonga ny atidohany tsy hahabaiko ny rantsam-batany. Volana maromaro tatỳ aoriana, dia nilaza tamin’ny fianakaviana Hoyt ny mpitsabo fa tsy maintsy mampiasa milina mpampiaina izy mba ho velona, ary tokony halefa any amin’ny toerana manokana hitsaboana ny olona manana fahasembanana mandritra ny fiainany.
“Tsy nanaiky izany anefa ny fianakaviana Hoyt”, hoy i Rick Reilly tao amin’ny lahatsoratra nosoratany mikasika ny fianakaviana Hoyt, ho an’ny gazetiboky Sports Illustrated (20 Jona 2005). “Tsikaritr’izy ireo ny fanarahan’ny mason’i Rick azy ireo eran’ny trano. Rehefa feno iraika ambin’ny folo taona i Rick dia nentin’izy ireo tany amin’ny departemantan’ny siansa sy ny famoronana fitaovana manamora ny fiainan’ny olona tao amin’ny Oniveristen’i Tufts, ary nanontanian’izy ireo raha toa ka misy zavatra azo atao mba hanampiana ilay zazalahy hifandray amin’ny hafa.
“Tsy misy hevitra”, hoy ireo mpahay siansa tamin’ny ray aman-drenin’i Rick. “Tsy miasa tsara mihitsy ny atidohany.”
“Itantarao hatsikana izy,” hoy ny rainy. Nataon’izy ireo izany. Nihomehy i Rick. Toa mandeha tsara ihany ny fiasan’ny atidohany.
Avy eo dia nampifandraisiny tamin’ny milina iray izay azony baikoina amin’ny alalan’ny fikasohan’ny lohany amin’ny bokotra mba hampihetsika ny “curseur” i Rick. Afaka nifandray tamin’ny hafa ihany i Rick nony farany. Nanomboka fiainam-baovao izy noho ity teknôlôjia ity. Anisan’izany fiainam-baovao izany koa ny fandraisany anjara tamin’ny hazakazaka lavitra ezaka (42 km eo ho eo) ambony seza misy kodiarana izay natosik’i Dick rainy. Taorian’ny hazakazaka dia nanoratra tamin’ilay milina i Rick hoe: “Dada a, rehefa nihazakazaka isika, dia nahatsiaro tena ho toy ny tsy manan-kilema intsony aho!”
Nanapa-kevitra ny hampiaina azy izany fahatsapana izany matetika araka izay azony natao i Dick. Efa-taona tatỳ aoriana, dia nandray anjara tamin’ny hazakaza-davitra natao tany Boston izy ireo. Avy eo dia nisy olona nanoso-kevitra azy hanao “triathlon” (fifaninana hazakazaka mizara telo izay misy lomano, hazakazaka am-bisikileta ary hazakazaka an-tongotra). Nanomboka teo dia nandray anjara tamin’ny hetsika ara-panatanjahan-tena an-jatony izy ireo, ny rainy no nanosika na nitarika ny zanany teny mandrakariva.
“Tsy misy adihevitra,” hoy i Rick nanoratra, “Ny Dadako no Dada miavaka indrindra amin’izao taonjato izao.”
Zavatra maro no iombonantsika amin’i Rick Hoyt. Manan-dRay isika izay tia antsika, mihoatra ny fitiavan’i Dick Hoyt an’i Rick aza, izay mihevitra antsika, ka nanaiky hanolotra ny Zananilahy tokana ho antsika.
Tahaka ny nanjo an’i Rick, ny vokatry ny fahotana dia nandreraka sy nampahalemy antsika rehetra. Raha amin’ny herintsika ihany, dia tsy manakaiky akory ny fiainana tokony hananantsika izay iainantsika amin’izao isika. Na hiezaka mafy araka izay tratra aza mantsy isika, dia tsy afaka ny hanatsara ny tenantsika hahatonga antsika ho voavonjy. “Tsy voa-janahary ny toerana misy antsika noho ny fahotana, ary ny hery izay hamerina antsika dia tsy maintsy ho ambony noho ny an’ny olombelona, raha tsy izany dia tsy misy vidiny.” – TMF, t. 280. Tsy maintsy izay ivelan’ny tenantsika no hamonjy antsika, satria tokony ho fantatsika mazava fa tsy afaka mamonjy ny tenantsika isika.
Izany no antony niandrandran’ny olona tamin’izany fotoana izany ny lanitra nony alina, hijery fanampiana ivelan’ny tenany: hijery ny famantarana ny fahatongavan’ny Mpamonjy. Ireo ray aman-drenibentsika taloha, ny Isiraelita, dia nanana anarana ho an’io Mpamonjy nandrandraina io, dia ny Zanak’i Davida izany, izay fantatsika amin’ny hoe Jesôsy avy Nazareta.
Natao ao amin’ny Filazantsaran’i Matio, izay lohahevitra hojerentsika amin’ity telovolana ity, ny tantaran’i Jesôsy. Jiosy iray nino an’i Jesôsy i Matio, ary iray tamin’ireo mpianany roa ambin’ny folo. Nilaza ny tantaran’i Jesôsy araka ny fahitany izany izy, araka ny tsindrimandry nomen’ny Fanahy azy. Tahaka an’i Marka sy Lioka ary Jaona, dia nitantara ny tantaran’i Jesôsy amin’ny maha-olombelona Azy i Matio: ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty, ary ny niakarany ho any an-danitra. Saingy nifantoka bebe kokoa tamin’ny maha-Ilay Mesia Nampanantenaina an’i Jesôsy izay avy any an-danitra izy. Tiany ho fantatry ny mpamaky fa niankina tamin’i Jesôsy ny famonjena an’i Isiraely. I Jesôsy Ilay anton-dresak’ireo mpaminany sy tondroin’ireo tandindona rehetra ao amin’ny TT.
Ny ankamaroan’ireo olona mpihaino an’i Jesôsy dia Jiosy, saingy mivantana amintsika ihany koa ny hafatra mitory fanantenana sy famonjena nentiny. Isika dia olona toa an’i Rick Hoyt, izay mila Olona hanao amintsika izay tsy azontsika na oviana na oviana atao amin’ny tenantsika.
Milaza ny tantaran’i Jesôsy, izay manao izany indrindra, i Matio.
Andy Nash, manana mari-pahaizana PhD (“doctorat”), dia prôfesora no sady pasitora any amin’ny Southern Adventist University any Collegedale, Tennessee. Nanoratra boky marobe izy, anisan’izany ny The Haystacks Church sy ny The Book of Matthew: “Save Us Now, Son of David.”